Mpihira be mpitia 1. A 6 ans de la disparation de Bayard, sa famille en France lui rendra hommage le 10 novembre prochain avec des artistes qui sont passés par le « Studio Bayard » à Mahamasina. Milay be i Spy-D e! Raha hampiditra tononkira dia mandehana eto. Tsy izany mantsy fa misy namako mipetraka aty a France izy dia milaza izy hoe very very ho izy ny sainy indrindra rehefa miresaka na manazava zavatra dia tsy tafavoakany lay zavatra tiany tenenina. Slt,fa maninona ilay fichier aplication tononkira no tsy mety telechargena intsony e.
Mpandresy [ Antsan’i Fenomanana ] Mahatsiaro trotraka! Agrad sy Skaiz 6 7. Ho namako ianao feat Twokii 13 Ramano be Galona 7. Raha toa ka tsy te hampiditra code isam-bolana ka tsy mampaninona anao ny dokam-barotra dia alaivo ny version Tononkira Malagasy Sans Code: Salut daholo izaho seraseda hanontany hoe manary fanahy marina ve tromba?
Toa lasa dedadedaka aho rah sendra miaradia. Jereo eto ny lisitry ny mpihira ka raha tsy ao ny mpihira dia ampidiro eto na mitadiava tononkira eto.
Midira eto azafady raha hampiditra hevitra. Hira be mpitia 1. Tsy maintsy hoe nifitra ihany aho Tsy maintsy niala tampoka ihany aho Na mamiko aza ny revinao Na tsy….
Valim-pitiavana ho an’i Fanaik Tsindrio eto dia alaivo ato tononkiraa tenimiafina Get the code for free Trouver gratuitement ici le code.
Fandraisana Fanorotoroana Momba ny takelaka Lisitra Hiditra. Mpihira be mpitia 1. Valim-pitiavana ho an’i Fanaik Mba marina serasefa 19 4. Mba tena hitia anao amin’ ny fo feno fitiavana Tena tiako ianao, izaho….
Raha ohatra moa tsy afaka mampiasa Google Play dia alaivo eto ny fichier apk. Adala an’i jesosy 14 8. Marihina fa io version maimaim-poana io dia mila serasega maimaim-poana manokana code miova isam-bolana. Tanora Masina Itaosy 5 8.
Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory…. Indraindray aho malomaloka mandinika matsiaro ireo tambitambinnao Tamin’ ireny aho tsy nahalala akory….
Toa ory ny fanahy, Raha mibanjina, Ny adim-piainana Tononkkra mihasarotra, Aza mitanondrika. Mpandresy [ Antsan’i Fenomanana ] Mahatsiaro trotraka! Mahavelom-bolo ny mahita ny vali-babena atolotry ny artista namany sy ireo mpankafy ny sangan’asany ary ireo tia zava-kanto tsotra fotsiny manoloana ny aretina mahazo an’i Fanaiky izao.
News La ‘Génération B Tsy atakaloko 13 9.
Jiro tsy misy [ roova ] Avelao oa zah, avelao oa zah e! Agrad sy Skaiz 6 7. Mitia mangina 19 3.
Mr Sayda Misié Sayda 10 2. Tiako ianao [ Landry Rpj ] Couplet1: Raha mampiasa ny version gratuite ianao dia azonao alaina any amin’ny Cyber ny code fa tsy voatery jerena amin’ny telephone. Tondrom-peo vao tonga 1.
Ramano be Galona 7. Slt,fa maninona ilay fichier aplication tononkira no tsy mety telechargena intsony e. Mpihira be mpitia 1. Raha hampiditra tononkira dia mandehana eto. Jereo eto ny lisitry ny mpihira ka raha tsy ao ny mpihira dia ampidiro eto na mitadiava tononkira eto.